Tag: awooda | Martech Zone
Waxaa jira maqaallo badan oo halkaa ku yaal oo ku saabsan sida ugu xun ee ugu badan. Waxaana jira malaayiin maqaal ah oo ku saabsan sida loo qoro nuxur weyn. Si kastaba ha noqotee, ma aaminsani in nooc kasta oo maqaal ah uu si gaar ah waxtar u leeyahay. Waxaan rumeysanahay in asalka waxyaabaha liita ee aan fulin ay kaliya tahay hal arrin - cilmi baaris liidata. Baadhitaan la'aanta mawduuca, dhagaystayaasha, yoolalka, tartanka, iwm. Waxay keeneysaa nuxur aad u xun oo ka maqan waxyaabaha lagama maarmaanka u ah